Fahasoavana roa sosona Sady vita mariazy no teraka
Teo amin'ny fanamasinana ny fanambadiana no nihetsi-jaza tampoka ilay vehivavy ka tonga dia notsofin-drano haingana dia nalefa tany amin'ny hopitaly.
Efa saika latsaka tao anatin’ny fiara “tête de cortège” moa ilay zaza fa vao tonga teny amin ny hopitaly “Saint fleur” teny Ampefiloha Anosy tonga dia latsaka, raha ny fitantarana. Ny akanjo mariage ihany no niterahany fa tsy nisolo izy, ary vao latsaka dia niverina tany amin'ny Espace fandraisambahiny iray teny By Pass indray rehefa nahazo alalana tamin'ny mpitsabo. Salama tsara ny zazakely sy ny reniny. Fahasoavana roa be izao tao anatin'ny iray andro satria sady vita ny mariazy no teraka soamatsara ilay zaza.